မင်္ဂလာသတင်းလေးပါ…သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနု ဒီကနေ့ လွတ်ပါပီတဲ့နော် – Shwe Likes
မင်္ဂလာသတင်းလေးပါ…သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနု ဒီကနေ့ လွတ်ပါပီတဲ့နော်
“ထာဝရ မိခင် ကြီး မမဆင့် လွတ်မြောက် လာပြီ ဆိုတာ ကြားရတော့ သားသား မင်းမင်း MinThantMgMg ပျော်သလို တာဝန်ကျေသော အကိုကြီး ဦးမောင် ZinYaw MgMg အတွက် လည်း အရမ်းကို
စန္ဒီကိုယ်တိုင်ဟာ သားသိမ်းဝ StevenKoKo သားမင်းမင်းနဲ့ ILBCမှာ ငယ်သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခဲ့သူ ရဲ့ မိခင်ဖြစ်နေတာမို့ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာသလိုမိခင်ချင်းလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ မမဆင့် ယနေ့မှ စ၍ အခက်အခဲမရှိ၊ အပူအပင်မရှိပဲ တရားနှလုံးသွင်းပြီး မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားကို ဆက်လက်အားထုတ်နိုင်ပါစေ။
မဆင့် လွတ်လာပါပီ ခင်ဗျာ
ဒီဘဝမှာပဲ လောကဓံ ရှစ်ပါးကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်တဲ့သူ တရားထူးတရားမြတ်ရသူများ ဖြစ်လာပြီး သူတော်စင်သူတော်မြတ် မိသားစု ဖြစ်ပါစေ။ ငြိမ်းချမ်းရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို လွယ်ကူထက်မြက်စွာ အားထုတ် ဆိုက်ရောက်ပါစေရှင်။”
United Kingdom မှ နေ့စဉ် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ညီမလေး စန္ဒီမ (Sandy Thin MarOo) (1st July 2020) Wednesday:
မဆင့်ရေ…. အထူးကိုဝမ်းသာရပါတယ်။ သား၊ ကိုစင်ရော်တို့နှင့်ထပ်တူကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဝဋ်ကြွေးရှိသမျှ ဒီမျှနှင့် ကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။
“ထာဝရ မိခငျ ကွီး မမဆငျ့ လှတျမွောကျ လာပွီ ဆိုတာ ကွားရတော့ သားသား မငျးမငျး MinThantMgMg ပြျောသလို တာဝနျကသြေော အကိုကွီး ဦးမောငျ ZinYaw MgMg အတှကျ လညျး အရမျးကို
စန်ဒီကိုယျတိုငျဟာ သားသိမျးဝ StevenKoKo သားမငျးမငျးနဲ့ ILBCမှာ ငယျသူငယျခငျြး ဖွဈခဲ့သူ ရဲ့ မိခငျဖွဈနတောမို့ သားသမီးခငျြး ကိုယျခငျြးစာသလိုမိခငျခငျြးလညျး ကိုယျခငျြးစာမိတယျ။ မမဆငျ့ ယနမှေ့ စ၍ အခကျအခဲမရှိ၊ အပူအပငျမရှိပဲ တရားနှလုံးသှငျးပွီး မိုးကုတျဝိပဿနာ တရားကို ဆကျလကျအားထုတျနိုငျပါစေ။
ဒီဘဝမှာပဲ လောကဓံ ရှဈပါးကို ကွံ့ကွံ့ခံ နိုငျတဲ့သူ တရားထူးတရားမွတျရသူမြား ဖွဈလာပွီး သူတျောစငျသူတျောမွတျ မိသားစု ဖွဈပါစေ။ ငွိမျးခမျြးရာအမှနျ မွတျနိဗ်ဗာနျကို လှယျကူထကျမွကျစှာ အားထုတျ ဆိုကျရောကျပါစရှေငျ။”
United Kingdom မှ နစေ့ဉျ ဆုတောငျးပေးနတေဲ့ ညီမလေး စန်ဒီမ (Sandy Thin MarOo) (1st July 2020) Wednesday:
မဆငျ့ရေ…. အထူးကိုဝမျးသာရပါတယျ။ သား၊ ကိုစငျရျောတို့နှငျ့ထပျတူကို ဝမျးမွောကျဝမျးသာဖွဈမိပါတယျ။ ဝဋျကွှေးရှိသမြှ ဒီမြှနှငျ့ ကပြေါစလေို့ ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့ပါတယျ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားက ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကို အမှတ်တရပြန်လည် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာ
သူမရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ထောက်ပြကာ သတ္တိရှိရှိ ပြောလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ဆွဲဆောင်မှုပြင်းလွန်းနေတဲ့ ရင်ဖိုစရာ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းစွာ ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်
သူမ ရဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာလေးကို အောက်လမ်းနည်း နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ခံနေရကြောင်း ဖွင့်ပြော လာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ